Ity no kopian'ny Xiaomi tsy manan-kenatra ho an'ny iOS | Vaovao IPhone
Xiaomi dia mitondra ny dika mitovy amin'ny iOS amin'ny ambaratonga hafa
Luis del Barco | | fifaninanana
Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy misy izay tsy mahalala ny orinasa teknolojia Xiaomi, izay nitombo be nandritra ny taona lasa noho ny fandrosoana azon'izy ireo tamin'ny finday finday avo lenta, manolotra fiasa mahaliana amin'ny vidiny ambany dia ambany. Amin'izany fomba izany dia nambolena toy ny fifaninanana lehibe ho an'ny orinasa manan-danja sasany amin'ity sehatra ity.
Ny zavatra iray hafa fantatsika anio dia ity orinasa manokana ity loharanom-tsindrimandry tena lehibe ao amin'ny orinasa paoma manaikitra, izay toa ataon'izy ireo an-tsokosoko, na farafaharatsiny izay no asehon'ny vokariny. Amin'izao fotoana izao dia afaka mahita fitaovana misy estetika tsy hay hadinoina isika mifototra amin'ny original Apple, saingy toa izao dia te-handroso kokoa izy ireo ary hanao toy izany koa amin'ny rindrambaiko.
Ny tarehy ananantsika rehefa mahita ilay rindrambaiko vaovao isika MIUI 6, izay miaraka amin'ilay vaovao Xiaomi Mi 4, tao anatin'ny tsy finoana tanteraka ny mahita hoe ahoana no mety hitovian'ny telefaona Android toa azy. Misy milaza amintsika fa ny volavolan'ireo rindranasa ireo, izay ahitanao sary ao amin'ny galeriana any amin'ny faran'ny lahatsoratra, mihoatra noho ny kisendrasendra fotsiny izy ireo.
Ny tena mahavariana amin'ity raharaha ity dia ny marika iray izay efa manomboka manana anarana manokana toa an'i Xiaomi, te-hampiavaka ny vokariny ho kopia amin'ny ambaratonga marobe amin'ireo vokatra natao tao Cupertino. Mazava ho azy fa hisy endrika foana izay mety hitovy, nefa tsy dia be loatra. Marina ihany koa fa tsy fantatsika ny fikasan'ny orinasa sinoa, angamba izay tadiavin'izy ireo dia, jereo akaiky araka izay azo atao ny hatsaran'ny 'iDevices' hisarihana mpanjifa maro kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » Xiaomi dia mitondra ny dika mitovy amin'ny iOS amin'ny ambaratonga hafa
Amin'ny farany dia hanao telefaona finday azo ampidirina ios izy ireo ary izany dia rehefa manana fifaninanana i apple ka mahatonga azy hivezivezy.
Aridane dia hoy izy:
Hackintosh dia zavatra iray, satria ny Mac sy PC dia mampiasa singa sy finday mitovy amin'ny iray hafa. Tena misalasala aho fa ho afaka handefa rindrambaiko iOS amin'ny fitaovana tsy manana fitaovana Apple izy ireo.
Valiny tamin'i Aridane
uff dia hoy izy:
haha tsy ho ela intsony vao hivoaka ilay zavatra manaitra, matahotra ve ianao fa hitranga izany? Ka azonao atao ny manana ny iPhone rehetra mivoaka ...
Valio amin'i uff
Ireo tsy maintsy matahotra dia ireo. Tsy hanao izany ny fiainako. Ary koa, efa ela aho no nampiasa finday mitovy. Raha mbola mety amiko io dia tsy mila miova aho. Angamba ilay matahotra sao misy finday toy ny iPhones ny hafa fa ny mandany kely dia ianao. 😉
"Xiaomi" dia diso tsipelina ao amin'ity lohateny ity.
3..2..1 fitakiana tsy ho ela! Ny zavatra iray dia ny fanaovana zavatra mitovitovy ary ny iray hafa adika .. Izay ilay zavatra nataon'i Samsung hatramin'ny vao tsy ela izay, hitako tsara fa te hahazo telefaona finday sy miaraka amin'ilay interface iOS ho an'ny mpampiasa kokoa izy ireo. Saingy ho an'i Apple dia niahiahy an'io izy fa tsy hoe satria hivarotra bebe kokoa fa satria zavatra noforoninao ary tsy tianao ny hahatongavan'ny hafa hanao zavatra mitovy amin'ny nataonao tamin'ny ezaka nataonao.
Eny, Apple dia tsy tokony ho sahirana loatra raha mbola manana fitadidiana tantara. Ny rafi-piasany voalohany dia novolavola tamin'ny rafitra Freebsd unix satria io no nahafahany nanararaotra ny asa vita sy natolotry ny hafa ary tsy nitaky azy hamoaka ny fanatsarana natao, tongava, ohatra iray…
Antony firy. Avy amin'ny zavatra novakiako Xiaomi ihany koa noho ny fanitsakitsahana ny fahazoan-dàlana GPL sy ny kaody tsy miankina izay tsy novolavolain'izy ireo akory, zavatra momba ny rafitra Xposed raha tianao ny hamaky.
Asier dia hoy izy:
Miala tsiny aminao milaza aminao, fa ny toa ... Tena tiako kokoa ny famaranana ny MIUI, raha maka tahaka Apple kely ianao ary mianatra, inona ny fahatsorana amin'ny faritra rehetra, dia mila mamakafaka azy araka ny nokendren'Andriamanitra ianao, na dia azonao atao aza tsy mangataka bebe kokoa ...
Ny famolavolana ny fikirana dia tsotra kokoa, ny endriny dia mahomby amin'ny fahitana ary manintona kokoa. Ao amin'ny fizarana rakikira, satria tsy mahafinaritra ilay marika voafantina ary ny fizarana ny efijery dia miharihary kokoa, andalana 5 raha oharina amin'ny 4 ho an'ny iOS. Ny kalandrie dia toa noforonina tsara kokoa tao MIUI, ny fampiharana teratany an'ny fakantsary sy calculator iOS dia toa tsara kokoa amiko.
Mamaly an'i Asier
FARANY dia hoy izy:
Mandrakizay, ny interface MIUI dia tsara kokoa noho ny IOS, ary mieritreritra aho fa tsy kopia ratsy toa ny voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity. Mino aho fa ny mpampanonta dia tokony ho marimarina kokoa amin'ny lahatsoratr'izy ireo ary alohan'ny hanomezana ny heviny (izay azo ovaina hatrany) hamoaka vaovao ankehitriny miaraka amin'ny ezaka tsy fizahan-tavan'olona.
Heveriko fa ity pejy ity dia feno olona miandany na manohitra an'i Apple, orinasa iray niavaka tato ho ato tamin'ny famelana antsika foana hiandry zavatra tsara kokoa sy amin'ny vidiny ambany.
Mamaly an'i duroduran
Fa maninona no ampiasaina amin'ny tanana iray ny efijery 5,5-inch an'ny iPhone 6?